Agha Data Recovery: Olee naghachi Data si agha nchekwa na ngwaọrụ
> Resource> Naghachi> agha Data Recovery: Olee naghachi Data si agha nchekwa na ngwaọrụ
Olee Otú M Pụrụ Naghachi faịlụ site agha mpụga ike mbanye?
M nwere 500GB agha mpụga ebe nchekwa na niile a na mberede mgbe m nwara imeghe ya, kọmputa gwara m na m nwere na-usoro ya. Ihe bụ nsogbu bụ na apụghị m usoro ya ugbu a n'ihi na m nwere nza nke ọrụ dị mkpa faịlụ na ya. My Ajụjụ bụ otú m nwere ike naghachi faịlụ site na ndi agha mpụga ike mbanye na-enweghị formatting ya?
Nke a bụ n'ezie bụghị a mgbagwoju anya ajụjụ. "The nchekwa ngwaọrụ chọrọ-Ị" bụ otu n'ime ihe ndị kasị ihe nke ndi agha nchekwa na ngwaọrụ data ọnwụ. Ị pụrụ nanị ikpebi usoro ya iji mee ka ọ laghachi azụ na nkịtị. Ma tupu nke a, ị nwere oké ohere iji nweta gị faịlụ na ọ laghachi azụ kwa.
Wondershare Data Recovery, Ma ọ bụ Wondershare Data Recovery for Mac bụ irè na n'ihe ize ndụ-free agha data mgbake ngwá ọrụ na-enyere gị aka naghachi data si agha nchekwa na ngwaọrụ, gụnyere agha obere ike mbanye, agha USB flash mbanye na agha SSD. Ọ bụ aka mgbe data furu efu, ehichapụ, Ị na ọbụna emerụ gị agha nchekwa na ngwaọrụ. The ike mgbake atụmatụ nke a usoro-enyere gị iji weghachite niile faịlụ na ụdị, gụnyere akwụkwọ, ihe oyiyi, ọdịyo faịlụ, videos na ndị ọzọ.
Ị nwere ike nweta a free ikpe mbipute a omume naghachi data si agha nchekwa na ngwaọrụ ugbu a!
Igosi agha Data Recovery na 3 Nzọụkwụ
Ugbu a, m na-aga hazie mgbake na Wondershare Data Recovery maka Windows kọmputa. Mac ọrụ nwere ike igosi na mgbake na yiri nzọụkwụ na Mac version nke usoro ihe omume.
Nzọụkwụ 1 Họrọ a mgbake mode na-amalite agha data mgbake
Dị ka oyiyi n'okpuru ngosipụta, ị nwere 3 mgbake ụdịdị ịhọrọ site na mgbe launching usoro ihe omume.
Naghachi ehichapụ, formatted ma ọ bụ merụọ faịlụ site na gị agha nchekwa na ngwaọrụ, ị pụrụ "Echefuola File Iweghachite" dị ka a mbụ na-agbalị.
Nzọụkwụ 2 iṅomi gị agha nchekwa na ngwaọrụ
A nzọụkwụ, ị nwere ike họrọ gị agha nchekwa na ngwaọrụ na iti on "Malite" bọtịnụ na window na-amalite ịgụ isiokwu ya.
Ọ bụrụ na faịlụ furu si a formatted agha nchekwa na ngwaọrụ, Biko, na-arụsi ọrụ "Kwado Deep iṅomi" nhọrọ ke window.
Nzọụkwụ 3 Naghachi data si agha nchekwa na ngwaọrụ
Hụrụ faịlụ gị agha nchekwa ngwaọrụ ga-egosipụta na "File Pịnye" ma ọ bụ "Ụzọ". Ị nwere ike ịlele otú ọtụtụ furu efu faịlụ gị agha nchekwa na ngwaọrụ nwere ike Ewepụtara site mbụ faịlụ aha.
Mgbe ahụ, ị ​​nwere ike họrọ faịlụ gị mkpa iji naputa na pịa "Naghachi" button na-azọpụta ha na kọmputa gị.
Cheta na: Biko adịghị ịzọpụta natara faịlụ gị agha nchekwa na ngwaọrụ ozugbo mgbe mgbake usoro iji zere data overwritten.
Olee otú Naghachi furu efu ma ọ ehichapụ faịlụ site Silicon Ike firma flash mbanye
Olee otú Igosi Mimoco USB Flash Drive Data Recovery